I-Romft - Yonke i-Glamping Island Private Resort - I-Airbnb
I-Romft - Yonke i-Glamping Island Private Resort
Isiqithi sinombuki zindwendwe onguDryft
I-Romft Darocotan yindawo entle yokuzonwabisa yesiqithi se-glamping esemantla e-El Nido, fumanisa ubuhle bePalawan ngoxa usibaleka isihlwele. Ngonxweme olude oluzimeleyo olumhlophe, amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka kunye namatye akhenkcezayo.
I- dryft ibonisa iindwendwe iziqithi zabucala ezingaqhelekanga ezenziwa ngabakhenkethi.
Le nkampu ye-glamping eco-friendly isebenza ngokupheleleyo kumandla elanga. Ifumaneka kwisiqithi esikude, ukuhamba ngezithuthi ngemizuzu eyi-45 ukusuka edolophini i-El Nido kunye nokuhamba ngesikhephe ngemizuzu eyi-20 ukusuka kumbindi weTeneguiban, iindwendwe ziza kukwazi ukufikelela kunxweme olude olumhlophe. Ngempela ipharadesi langasese.
Ukutya kwakho kuza kuba nokutya kwasekuhlaleni okunempilo kunye neencasa ze-fusion, ezilungiselelwe kwindlu yethu eyakhiwe emthini enchanted 4. Phumla kwindawo yokunxiba yomnatha emisiweyo ejongene namanzi asemanzini, okanye uziqhushekele kumgangatho wesine weentaka phakathi kweengqimba zemithi yesundu.
Onke amaqhugwane ethu e-glamping akhiwe kwaye ayilwa ngumculi wasekuhlaleni, avela ngokupheleleyo kwizinto zendabuko neziphindayo.
Kude kuthi, ngokuqinisekileyo awuzukufumana nto ngaphandle kwezinto ezintle kunye neenkumbulo ezintle.
Sifumaneka kunxweme lwesiqithi sabucala. Yimizuzu engama-45 emva koko iveni yemizuzu engama-20 isikhephe esiqhutywa kude ukusuka kumbindi wedolophu i-El Nido. Lindela kuphela isandi samaza, ingoma yeentaka, ukudanisa kwemithi yekhokhonathi, nokuhleka kwabantu abonwabileyo ngeenxa zonke! Hamba ungenanto, fumana tan yakho, ukuqubha kwi pristine aquamarine ulwandle, uze ulethe uncumo kwaye ukupholisa nathi kwi yokutyela yethu lounge.
Umbuki zindwendwe ngu- Dryft
Ukuze wenze ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kumnandi, siza kuba khona ukususela ekuseni ukuya elangeni.